Galmudug“Waxba ka lama socon waxa lagu qaban jiray xarunta saaka la weeraray-Dhageyso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Galmudug“Waxba ka lama socon waxa lagu qaban jiray xarunta saaka la weeraray-Dhageyso
Galmudug“Waxba ka lama socon waxa lagu qaban jiray xarunta saaka la weeraray-Dhageyso
November 26, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Alshabaab ayaa saaka hiirti waaberi weerar ku bilowday qaraxyo waaweyn ku qaaday xarun uu magaalada Gaalkacyo ka daganaa Cabdiweli Cilmi Yare oo ahaa shakhsi xambaarsanaa dariiqo diimeed ay dadku aad ula yaabanaayeen mudooyinkii dambe.
Weerarka oo ahaa mid qaraxyo ku bilawday ayaa waxaa sidoo kale jiray rag hubeysan oo gudaha u galay Xarunta kuwaaasoo khaarijiyay badi dadkii ku sugnaa xarunta dhexdeeda.
Al-Shabaab oo saacado kadib sheegtay mas’uuliyadda weerarkaas,ayaa waxa ay tilmaameen in ay dileen nin sheegtay Nabanimo,isla markana u gefay Nabigeena Muxamed NNKH sida ay ku baahiyeen baraha ay wararkooda ku faafiyaan.
Ku dhawaad 20 ruux oo uu ku jiro Cabdiweli Cilmi Yare ayaa lagu dilay weerarka ay saaka hiirti waaberi Shabaab ku qaadeen xarunta uu Cabdiweli ka daganaa Koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Hadaba gudoomiye ku xigeenka dhinaca Amniga iyo siyaasada gobolka Mudug ee maamulka Galmudug oo la hadlay Horseed media ayaa sheegay in ay ciidamada amaanku soo afjareen weerarka isla markaana gacanta ku dhigay mid kamid ah raggii fuliyay weerarkan.
Waxa uu sheegay in aysanba horey wax war ah uga haynin waxa lagu qaban jiray xarunta la weeraray hase ahaatee ay ogaayeen in shakhsiga xarunta lahaa uu goobta la weeraray ku haystay dad isugu jira ilaalo iyo dad kale oo taabacsanaa dariiqada uu aaminsanaa Cabdiweli Cilmi.
Hadaba gudoomiye xigeenka amniga Galmudug ayaa u waramay Aweys Bashir